TRUESTORY: သမ္မတကြီး vs ဒေါ်စုကြည် ( တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို မည်သူ တကယ်ချစ်သနည်း ? )
...... မကြာသေးခင်ကပဲ မွတ်စ်လင်မ်ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့နဲ့ ကျွန်မ တွေ့ဆုံလာ ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြန်မာကလွဲပြီး တခြားနိုင်ငံကို မရောက်ဖူးကြပါဘူး။ မြန်မာကလွဲပြီး တခြား ဘယ်နေ ရာကိုမှ အမိမြေအဖြစ် မခံယူကြပါဘူး။ သူတို့ကို ကျွန်မတို့ရဲ့နိုင်ငံသားမဟုတ်သလို အထင်ရောက် သွားအောင် ဖန်တီးနေတာက တကယ်စိတ်မကောင်းစရာပါ။"
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှိုင်းယှဉ်ချက်
၁ ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါ ။ ( တိကျပြတ်သားသော ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် နိုင်ငံ တကာကို ထုတ်ဖော်ပြော ) ( သမ္မတကြီး )
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျွန်မတို့ တိုင်းရင်းသား ဟုတ်မဟုတ် ၊ မသိပါဘူး ။ ( ပြတ်သားစွာ မငြင်းရဲသော ပြောဆိုချက် ဖြင့် နိုင်ငံတကာကို ထုတ်ဖော်ပြော ) ( ဒေါ်စု )
၂ ။ ကုလားကို ကုလားဟုခေါ်ဆိုသည်အတွက် ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်း မရှိ ။ ( သမ္မတကြီး )
ကုလားကို ကုလားလို့ မခေါ်နဲ့ ကျွန်မ အသဲ နာနိုးနိုးနိုး ၊ ကုလားလို့ခေါ်ရင် မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဆရာ/မ မဆုံးမသူ ဟု သုံးစွဲပြောဆို ။ ( ဒေါ်စု )
၃ ။ ဆန်ရှင် ဖွင့်ပေးဖို့ အတွက်တစာစာ တောင်းခံခဲ့ ။ ( သမ္မတကြီး )
ဆန်ရှင် ပိတ်ရန် -င်star ပြီး မာနကြီး တခွဲသားနဲ့ ပိတ်ခိုင်း ။ ( ဒေါ်စု )
၄။နိုင်ငံ အရေး ၊ ပြည်သူ လူထုတွက် အလေးပေးပြီး နိုင်ငံ ပြင်ပသို့ ထွက် ( သမ္မတကြီး )
ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ နိုင်ငံ ပြင်ပသို့ ထွက် ။ ( ဒေါ်စု )
၅ ။နိုင်ငံ ပြင်ပတွင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ကြွေးမြှီများ ကင်ရှင်းဖို့ အကူအညီတောင်းခံ ။
( သမ္မတကြီး )
နိုင်ငံ ပြင်ပတွင် ကျွန်မ ခွေးလေးလောက်သာ လူတွေကရိုးသာကျရင် အားလုံးငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ ။ နိုင်ငံ အတွက် ၁ လုံးမှမပါ ။ ဆရာကြီး အထှာနှင့် -င်satr ။ ( ဒေါ်စု )
အတိုက်အခံတို့၏ ရိုင်းပြမူ့များကို နွေးထွေးစွာ ဆွေးနွေး အကြံပေး/ယူ ။ ( သမ္မတကြီး )
ဝေဖန်သူ / မထောက်ခံသူတို့အား ပြစ်တင်ပြောဆို ။ မိန်းမကျင့် မိန်းမကြံအတိုင်း မထိခလုပ် ထိခလုပ်စောင်းမြောင်းပြောဆို ။ ( ဒေါ်စု )
၇ ။ ၂၀၁၅ အတွက် ကျွန်တော်ဟာ မဲပေးသူသာဖြစ်ရမည် ။ ( သမ္မတကြီး )
၂၀၁၅ တွင် သမ္မတဖြစ်ရေး ကြိုးစားနေ ၊ အာဏာရှင်ဖြစ်ရန် ကြံစည်နေသည် ။ ( အင်းပေ့ါ မမြင်ဖူး မူးကို မြစ်ထင်နေတာလေ ) ( ဒေါ်စု )
၈ ။ အစားထိုး နှလုံးနဲ့ ကျန်းမာရေး မကောင်းသော်လည်း ရခိုင်သေဒသို့ အရောက်သွား
ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သော်လည်း တိုင်းရင်းသားတွေ ဆီမရောက် တိုင်းတပါးသို့ အစဉ်ရောက်နေ ။ ( ဒေါ်စု )
မြောက်များစွာသော အချင်းအရာများရှိ၏ ဆက်လက်ပြောဆိုရန် မတန်လို့ မပြောတော့ပေ ။
ထိုဖြစ်ရပ်များသည် အားလုံးသော ပြည်သူလူထု အမြင်ပင်ဖြစ်သည် ။
"by the people, of the people, and for the people." စကားအတိုင်း မည်သူ က လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးခဲ့လေ သနည်း ။ အပြောမဟုတ် အလုပ်ဖြင့် အမြဲ သက်သေပြ သလို ၊ ပြည်သူတွေ လက်မခံနိုင်သည့် ကိစ္စကို ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသစွာ ငြင်းဆန်လျှက်ရှိသည် ။
သမ္မတရာထူးအား မျှော်လင့် တကြီးဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိ ၊ သမိုင်းပေး တာဝန်အရ ပခုံးပေါ် ကျရောက်လာသော တာဝန်ကို ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်လျှက် ရှိသော သမ္မတကြီးနှင့် ၊
၂၀၁၅ သမ္မတဖြစ်ရေး ကျိုးပန်းလျှက်ရှိပြီး ၊ မဲဆွယ်ရေး အလုပ် ၊ ကုလား နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး အလုပ်သာ အစဉ်အမြဲ ခေါင်းထဲရှိသော ဒေါ်စု .....
( တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကို မည်သူ တကယ်ချစ်သနည်း ? )
Posted by TRUE STORY at 5:54 PM